အားလုံးပြုံး​ပြီးမှမရယ်​ကြပါနဲ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » အားလုံးပြုံး​ပြီးမှမရယ်​ကြပါနဲ့
Posted by thit min on Aug 27, 2011 in Aha! Jokes, Satire, Society & Lifestyle |9comments
မင်းနဲ့ငါနဲ့ညားလာတာ အခုဆိုရင်အိမ်ထောင်သက်တမ်း အနှစ်အစိတ်ရှိပြီ ။
တကယ်တမ်းပြောရရင်အဲဒီကိစ်စဟာ မှားယွင်းမှုတစ်ခုရဲ့ ရလဒ်ပဲ ”
ဘယ်လို ဘယ်လို ဘာပြောတယ် ရှင်းစမ်းပါဦး”
ဒီလိုလေ၊ အဲဒီမင်းကို စတွေ့တဲ့နေ့က ငါလေချွန်မိတာ မင်းကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူး။ တက္ကစီသမားကိုကွ ”
” ဒီနေ့ ကျွန်မချက်ကျွေးတဲ့ဟင်းက ဘယ့်နှယ်နေလဲဟင်”
“ကောင်းတယ် မိန်းမရာ၊ ချိုပြီးဆိမ့်နေတာပဲ ”
“ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် လက်ထပ်ပြီးတဲ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ဟန်းနီးမွန်းထွက်ချင်လို့ခွင့်ဆယ်ရက်လောက် ပေးပါခင်ဗျာ ”
“အင်း ….. ခက်တာပဲ။ လောလောဆယ်အလုပ်တွေ ကျပ်နေတော့တစ်ယောက်ယောက်မရှိရင်လည်းမဖြစ်ပြန်ဘူး။
“ဟောဒီခွက်ထဲက ကျောက်ခဲလေးတွေဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲ “”
ဪ ….. အဲဒါကျောက်တုံးလေးတွေလား၊ ကျွန်တော်ကသောက်ရမယ့်ဆေးမှတ်လို့ခုနကပဲသောက်လိုက်မိပြီဆရာမ “”
ဟောတော်ဒုက္ခပါပဲ။ ရှင့်ဆီးအိမ်ထဲကခွဲထုတ်ထားတဲ့ဟာတွေရှင့် 。。အဲဒါရှင်သတိရလာရင် ပြဖို့ထားတာ။ ”
“မင်းတို့လင်မယား ပြန်ပေါင်းထုပ်သွားကြပြီလို့ကြားရတာ ၀မ်းသာတယ်ကွာ၊
ထင်းတွေအတူတူခွဲနေကြတာ တွေ့မိသေးတယ်ကွာ ”
“ထင်းမဟုတ်ဘူး သူငယ်ချင်းရဲ့ ၊ အိမ်ထောင်ပရိဘောဂတွေ ”
“မင်းဟာကားကို တစ်နာရီမိုင်တစ်ရာနှုန်းလောက်နဲ့ မောင်းလာတယ် ။ပြီးတော့ညအမှောင်ထဲ
ကားရှေ့မီးကို ဖွင့်မမောင်းဘူး ။ လမ်းလည်းမှားလာတယ် ။ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်လည်း
မပါဘူး ။ ကိုင်း …..ဒီလောက်တောင်အပြစ်တွေများတာ
“ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ကျွန်တော့်မှာအပြစ်တစ်ခုပဲ ရှိပါတယ် ။
“ဒီလူနဲ့သမီးလက်မထပ်ချင်ဘူးမေမေ ၊ သူနဲ့သမီးနဲ့ အယူအဆချင်း မတူကြဘူး ။
သူကငရဲရှိတယ်ဆိုတာကိုမယုံဘူးလို့အကြောက်အကန်ပြောတယ် မေမေရဲ့ ”
“လက်ထပ်မှာသာ ထပ်လိုက်ပါသမီးရယ် ၊ ငရဲတကယ်ရှိကြောင်း သိအောင်လုပ်ဖို့မေမေ့တာဝန်ထားလိုက်စမ်းပါ”
“ခင်ဗျား မသေသင့်ဘူးဗျ ။ ဟုတ်တယ် ၊ တကယ်ဆို ခင်ဗျား မသေသင့်သေးဘူး ”
“ဟေ့လူ မူးမူးနဲ့ အုတ်ဂူရှေ့မှာငိုပြီး ဘာတွေလာပြောနေတာလဲ ။
“ဟင့်အင်း ….. ကျွန်တော့်မိန်းမရဲ့ ပထမယောက်ျားပါ ”
“မင်းခိုးတဲ့ပစ်စည်းတွေက အစုံပါပဲလားကွ ၊ တီဗွီရယ် ၊ အောက်စက်ရယ် ၊
ရေခဲသေတ္တာရယ်၊ ပန်ကာရယ် ၊ မီးခံသေတ္တာရယ် ၊ အိမ်သားတွေတစ်ယောက်မှမနိုးစေဘဲ
အပြင်ကိုဒါတွေအကုန်သယ်ထုတ်နိုင်တာ ချီးကျူးပါတယ်ကွာ ”
“ဟာ ….. တရားသူကြီးမင်းကလည်း ကျွန်တော့်ကိုအနေခက်အောင်မြှောက်နေပြန်ပြီ”
“တရားခံက သူငယ်မကို ပွဲခင်းထဲက ခေါ်ထုတ်သွားပြီး လူရှင်းတဲ့နေရာရောက်မှပါသမျှလုယက်သွားတယ်ဆိုတာ
“ဟုတ်ပါတယ် ၊ တရားသူကြီးမင်း ”
“ဒါဖြင့်ရင် ပွဲခင်းပရိသတ်ထဲမှာတုန်းက ဘာဖြစ်လို့အော်ဟစ်အကူအညီ မတောင်းခဲ့တာလဲ”
“ကျွန်မနားကိုအသာကပ်ပြီး လက်ကုတ်ခေါ်သွားတုန်းက ဒီလိုလုပ်လိမ့်မယ်မထင်ခဲ့မိလို့ပါရှင်”
“ဗျို့ အိမ်ရှင်တို့ ၊ တစ်ဆိတ်လောက်ခွေးကြည့်ပေးပါ ”
“မစိုးရိမ်ပါနဲ့ ရဲရဲသာလာခဲ့ပါ ”
“ခင်ဗျားခွေးက မကိုက်တတ်ဖူးလားဗျ ”
“ကျွန်တော်လည်း အဲဒါကိုသိချင်နေတာ ၊ ဒီကောင်ကအခုမနက်မှ ၀ယ်လာတာလေ ”
“ဗျို့ဆရာသမား ၊ ဟိုလူသူ့မိန်းမကို မိကျောင်းကန်ထဲ တွန်းချနေတယ် ။မြန်မြန်သွားကယ်ကြရအောင်”
“ဟင်း ….. တယ်ခက်တဲ့လူပဲ ၊ မိကျောင်းမွေးမြူရေးစခန်းမှာပြင်ပအစားအစာတွေလုံးဝကျွေးခွင့် မရှိတာကို သူမသိလို့ထင်တယ် ”
“ဟောဟိုထိုင်နေတဲ့လူဟာ ခုနကတစ်ချိန်လုံးလိုလို ကျွန်မကိုစိုက်ကြည့်နေတာ၊အခုမမရောက်လာမှပဲ ခပ်တည်တည်နေဖော်ရတော့တယ် ”
“ဘယ်သူလဲ ဟိုလူလား ၊ အဲဒါမမအမျိုးသားလေ ”
“ခင်ဗျားတို့ ထမင်းဆိုင်က ကြက်သားဟင်းပန်းကန်ကို ကြည့်ပါဦး ၊
” ဘာလဲ ၊ အမွေးနဲ့ လိုချင်လို့လား”
*မင်းသားဟာအပြင်းထန်ဆုံး အရိုက်အနှက်ခံနေရချိန်မှာတောင်နာကျင်ပုံမပြပေမယ့်မင်းသမီးက အနာကို သန့်စင်ပြီးဆေးထည့်ပေးတဲ့အခါမှာတော့နာကျင်ပြီးတွန့်သွားတတ်ပါတယ်။
*မင်းသားနဲ့မင်းသမီးဟာ မိုးရေထဲမှာ အရင်မ”က”ရသေးသရွေ့ ချစ်သူမဖြစ်ရပါဘူး။
ဘုရားပဲ သိနိုင်တဲ့) လူ(၁၀၀)လောက်ထွက်လာပြီး သူတို့နဲ့အတူ ၀င်ကလေ့ရှိပါတယ်။
*ဇာတ်သိမ်းခန်းကျရင်မင်းသားဟာသူနဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့လူဆိုးကသူအစ်ကိုဖြစ်ကြောင်းသူကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်နေတဲ့အိမ်ဖော်မိန်းမကြီးကသူ့အမေဖြစ်ကြောင်း၊ရဲအရာရှိကြီးကသူ့အဖေဖြစ်ကြောင်း၊တရားသူကြီးကသူ့ဦးလေးဖြစ်ကြောင်း စသည်ဖြင့် စသည်ဖြင့်ဖော်ထုတ်သိရှိသွားတတ်ပါတယ်။
“No Problem”, “MyGod!”, “Get Out!”, “Shut
Up!”, “Impossible” နဲ့ “Please forgive me!”တို့ဖြစ်ပါတယ်။
*မင်းသားမင်းသမီးတွေဟာ သီချင်းဆိုနေတုန်းမှာပဲ မြေကြီးပေါ်လှဲချပြီးလူးလှိမ့်နိုင်သလို အ၀တ်အစားတွေလဲ
ဖော်ထုတ်ဖို့စကားအနည်းငယ်ပြောပြီးမှ(သေကြောင်းပြတဲ့ အနေနဲ့) ခေါင်းကစောင်းကျသွားပါတယ်။
ပေးဖို့ ရွှေတုံးငွေတုံးတွေ သူတို့မှာ အမြဲရှိနေတတ်ပါတယ်။
*တိုင်းပြည်က ဘယ်လောက်ကြီးကြီး၊ ဘယ်နေရာတွေမှာပဲရောက်နေနေမင်းသားနဲ့လူဆိုးတွေဟာ မကြာခဏ လမ်းမှာဆုံလေ့ရှိကြပါတယ်။
*အတွင်းဒဏ်ရာတွေ ကုသရတာလည်း အရမ်းလွယ်ကူပါတယ်။တင်ပလင်ခွေထိုင်၊ဒူးခေါင်းပေါ်မှာ လက်တွေတင်ပြီးရင် ခေါင်းက မီးခိုးတွေထွက်သွားတာနဲ့ပျောက်ပါပြီ။
*သူတို့ဟာ အကျီလက်တွေ ခါးပတ်တွေထဲမှာ ပစ္စည်းတွေအများကြီး(အထူးသဖြင့်ရွှေတုံးငွေတုံးတွေ) ထည့်နိုင်ပြီး ဘယ်တော့မှလည်းပြုတ်မကျကြပါဘူး။
“နွေ”ကာလရောက်လာချိန်တွင် “တနင်္ဂနွေ” သားသမီးများသည် မီးနားနေရသလိုပူစပ်ပူလောင်ဖြစ်လတ္တံ့။
ဖြစ်တတ်သည်။ ယတြာချေလိုသူများအနေဖြင့်အသုဘတစ်ခုသို့သွားပြီး အလောင်းနှင့်အတူ ၂ ရက်ခန့်
“ကျားဆိုမှကျား”တနင်္လာသားသမီးများသည်ယခုလအတွင်းကြောင်တောင်တောင်နိုင်ခြင်း၊ကျပ်မပြည့်ခြင်းတို့ကြောင့်ကျက်သရေမရှိဖြစ်တတ်သည်။ ခြေထောက်၊ ခါး၊ ခေါင်းစသည့်တနင်္လာနံအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများ ခွဲစိတ်ခံရကိန်းရှိသည်။
ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းဖြင့်ဘာအလုပ်မှ မရနိုင်သဖြင့် ဘာမှ မလုပ်ပါနှင့်။ ချစ်သူနှင့်ချိန်းတွေစဉ်ချောင်းရိုက်ခံရတတ်သဖြင့် သတိပြုပါ။ ချက်တင်း (Chatting) ဝင်သူများချူစားခံရလတ္တံ့။
ဝင်ငွေကောင်းသော လုပ်ငန်းများအဖြစ် မြင်နေရသည်။အဆိုးများပျောက်ကင်းစေမည့် ယတြာမှာ
(အင်လျားကန်ကဲ့သို့သော) ကန်ဘောင်တစ်ခုသို့အဝတ်အစားလုံးဝမဝတ်ဘဲ သွားကာ “ကံတွေ ဟောဒီလို
လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ် တက်လာပြီ” ဟုသက်စေ့ကြွေးကြော်ပါ။
မဟုတ်သည့်တိုင် တောက်ပနေခြင်းမျိုးလည်းမဟုတ်သဖြင့် ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ အလယ်တွင်လတ်နေတတ်သည်။
ရုပ်ဆိုးသော၊ ယုတ်မာသော၊ လော်မာသောအိမ်ထောင်ဘက်သည် သင့်အားအကျိုးပေးလတ္တံ့။ အကန်းလည်း
ပေးလတ္တံ့။ ယတြာချေလိုပါကတစ်ခုသော ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ရထားလာနေချိန်၌ ရထားလမ်းပေါ် ခဏလေးလှဲအိပ်ပါ။
စီးပွားရေးတွင်ပူဖောင်းရောင်းခြင်း၊ ဖိနပ်စောင့်ခြင်း၊ ဖဲရိုက်ခြင်းများ အမြတ်များအံ့။ကျန်းမာရေးတွင်
ပန်းနာရင်ကြပ်မှသည်ပန်းညှိုးပန်းသေမျက်စိကွယ်ဖုတ်လှိုက်ဖုတ်လှိုက်နှင့်အသက်သေသည်အထိဖြစ်တတ်သဖြင့်ဘုရားတရားလုပ်ချိန်တန်ပြီဟုဆိုချင်သည်။ ပညာရေးတွင် ပထမရရန်ကြိုးစားခဲ့သော်လည်းအခြေအနေမပေးသဖြင့်ပန်းရံဆရာဖြစ်သွားအံ့။
နှလုံးသားရေးတွင်ချစ်ရေးဆိုလာသူကိုပဲများပြီးပါးရိုက်မိပါကမိုက်မဲခြင်းသာဖြစ်ပြီးမည်သူကိုမဆိုမြန်မြန်လက်ခံလိုက်သင့်သည်။ကံကောင်းစေမည့်ယတြာမှာပိတ်စတစ်ခုတွင်“ဘိန်းဖြူရောင်းသည်”ဟုရေးပြီးမ.ယ.က ရုံးသို့ ပျော်ပွဲစားထွက်ပါ။
သောကြာသားသမီးများကြွက်ကလေးများလို တွင်းအောင်းနေရအံ့။အပြင်ထွက်လာသူများသည်လည်း ကြွက်ကလေးများလို ထောင်ချောက်မိကာထောင်ကျအံ့။
အလုပ်အကိုင်အကြံအစည်များကို သိုသိုသိပ်သိပ် ကြံစည်သည့်တိုင်အောင်သောကများနေနိုင်သည်။ ကျန်းမာရေးတွင်သေလောက်သည့်ကံများမရှိသော်လည်းသစ်ပင်ပိခြင်း၊
ကလေးရယ်” ဟု ပြောလာသူရှိပါက“ရူးချင်ယောင် ဆောင်မနေနဲ့” “ရှေ့မှာ သေခြင်းရဲ့ တံခါးများ”
ဟု ပြန်ပြောရန်ဝန်မလေးပါနှင့်။ ကံတက်စေမည့် ယတြာမှာ – တစ်ခုသော သောကြာနေ့တွင်သိက္ခာရှိသူတော်ကောင်းတစ်ဦးကိုသဲနှင့်ပက်ပြီး “သိပ်တတ်နေတယ်ပေါ့လေ” ဟု သက်စေ့ရေရွတ်ပါ။
**တင့်တောင့်တင့်တယ်နေချင်သော စနေသားသမီးများ “ဒုက္ခ” ဆိုသော စကားလုံးနှင့်ရင်းနှီးပြီး
အလစ်မပေးသင့်ပေ။ အဆိုးများပြေပျောက်သွားမည့် ယတြာမှာ နှာစေးနေသူတစ်ဦးထံမှနှပ်ချေးနည်းနည်းတောင်းစားပါ။
အားပေးသွားတယ်နော် အားရပါးရပြုံးပြီးမှ ရယ်သွားပါကြောင်း
ကိုသစ်မင်း. ကတော့လုပ်ချလိုက်ပြန်ပီ။ဒါလေးကတော့ကြိုက်လို့ ပါ—-
“ဟုတ်ပါတယ် ၊ တရားသူကြီးမင်း “
မချိမဆန့် ကို ရယ်လိုက်ရပါတယ် ။
အရယ်ကောင်းလို့ တောင် ထွက်ကျ ကုန်ပါသေးတယ် ။ မျက်ရည်နဲ့နှပ်..တွေ။
“ခင်ဗျား မသေသင့်ဘူးဗျ ။ ဟုတ်တယ် ၊ တကယ်ဆို ခင်ဗျား မသေသင့်သေးဘူး “
“ဟင့်အင်း ….. ကျွန်တော့်မိန်းမရဲ့ ပထမယောက်ျားပါ “ …………….. အကြိုက်ဆုံးဟာသလေးပါ ။ ခုငိုနေတဲ့သူ သေရင်တော့ တတိယမြောက်တစ်ယောက် လာငိုဦးမယ်ထင်တယ် ။ ဟာသဆိုတာတွေက လက်တွေ့ဘ၀တွေကို အခြေခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတာပါ ။ ရယ်စရာလေးတွေပါသလို တွေးစရာလေးတွေပါလာတယ် ။ ဟာသလေးတွေအားလုံးကြိုက်ပါတယ် ။ ကြုံရင်တင်ပေးပါဦး ။ ဖတ်ချင်ပါသေးတယ် ။
တရုတ်ကားနဲ့ ကုလားကားရှယ်မယ်နော် ဦးလေး
စဉ်းစားမိပီးအူတတ်အောင်ပါရီမိတယ်။ဟုတ်တာပဲဗျ :-) :-)